Midowga Yurub, ayaa Dowladda Somaliya iyo Maamul Goboleedyada ugu baaqay in la joojiyo fulinta xukunada dilalka – STAR FM SOMALIA
Midowga Yurub, ayaa Dowladda Somaliya iyo Maamul Goboleedyada ugu baaqay in la joojiyo fulinta xukunada dilalka
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Somaliya, ayaa waxay Ururka Midowga Yurub ku gacanseyrtay joojinta fulinta xukunada dilalka, ka dib markii ay sheegeen in Maxkamaddu qaado kiisaska dadka rayidka ah.
Midowga Yurub, ayaa Dowladda Somaliya iyo Maamul Goboleedyada ugu baaqay in la joojiyo fulinta xukunada dilalka, iyagoo sheegay inay tani bilow u tahay tallaabada Somaliya looga joojinayo fulinta xukunadaasi. Xukunadan waxay ku sheegen wax ka dhan ah nolosha bani’aadamka iyo sharafkiisa.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Ciidamada Qalabka Sida, Liibaan Cali Yarow, ayaa waxa uu beeniyay in Maxkamaddu ay qaado kiisaska rayidka ah, isla-markaana ay qaado oo qura kiisaska Ciidamada Qalabka Sida Somaliya iyo Shabaabka.
Gudoomiyaha waxa kaloo uu beeniyay in Maxkamadda ay sanadkan oo qura ay fulisay 29 kiisas oo xukuno dil toogasho ah, wuxuuna xusay intii Maxkamadda ay jirtayba aan la dilin tirada intaa le’eg.
Sidoo kale waxa uu si xoogan u beeniyay in racfaanka loo diido dadka marka ay xukunto Maxkamadda, isla-markaana ay Maxkamaddu dadku u ogoshahay inay racfaan ka qaataan xukunada.
Isagoo la hadlaayay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa wuxuu diiday in Shabaab loogu yeero inay shacab yihiin, bacdamaa sida uu sheegay ay dareys ciidan xiran yihiin, isla-markaana ay hubka wataan.
Liibaan Cali Yarow wuxuu muujiyay inaanay Somaliya diyaar u ahayn joojinta xukunadaasi, maadaama ay xukunada dilalka waafaqsan yihiin xeerka ciqaabta Somaliyeed.
Midowga Yurub waxa uu ka digay in la dedejiyo xukunada dilalka ah ay fulinayso Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, isla-markaana uu soo jeedinayo in dadkaasi la siiyo fursado ay racfaan kaga qaadan karayan xukunadaasi.
Villa Hargeisa ayaa waxaa ka furmay shirkii wada tashiga mooshinka madaxweynaha
Haweenay dishay gabar saddex sano jir ah Booliska Degmada Jowhar gacanta ku soo dhigeen
Taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay in rag Siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda degaannada Koonfur Galbeed ay Magaalada Muqdisho ka wadaan qorsho ay ku doonayaan in xilka looga tuuro Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis (laftagareen).
Xildhibaanka oo ka hadlayay kulan ka dhacay Magaalada Baydhabo wuxuu sheegay in ciddii rabta inay meesha ka saarto Madaxweyne laftagareen markii xilkiisa uu dhamaado ay tallaabadaas qaado, balse ay ogaadaan dhibaatada ay leedahay in maamul dhisan la burburiyo sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi kudaray in dadka abaabulka wada ay yihiin dad ka yimid dalka dibaddiisa, kuwaas oo aan ogeyn dhibaatada loo soo maray dhismaha Maamulka Koonfur Galbeed, wuxuuna sheegay inay la dagaalami doonaan cid kasta oo isku dayda inay carqaladeeyso Maamulka Koonfur Galbeed.
Hadalka Taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa kusoo aadaya xilli dalka loo doortay Madaxweyne Cusub, isla markaana uu meesha ka baxay Madaxwrynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo siweyn u taageeri jiray Maamulka Koonfur Galbeed kana qeyb qaatay doorashadii Madaxweyne Cabdi Casiis (laftagareen).
munaaasabadan ay soo agaasimeen maamulka iyo howl wadeenada isbitalka keysaney ayaa aheyd mid lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka iskufuranka haweenka afka qalaad laguyiraahdo international day to end obstrect fistula
23 may sanadwalba aya acaalamka oo idil laga xusaa maalintan iyadoo dumar badana ay dhibaatadan laildarnyihiin dhibaatada xanuunka iskufuranka
howl wadeenada cispitalka keysaney ayaa wacyigelin dhameestiran kusoobandhigay munaasabbada taa oo loogu hortagayo dhibaatada xanuunka iskufuranka
prof axmed maxem axmed taajir oo ah agaasimaha guud ee cispitalka keysaney ayaa kagamahdceliyay howlwadeenada guud cispitalka qaabka ay ugu qidmeeyen hooyooyinka somaliyed oo laildaran xanuunkan una balanqaaday bulshada somaliyeed in ay howshan siiwadidoonaan
Ra’iisal wasaaraha XFS Mahamed Xuseen Rooble ayaa baabi’iyay warqad wasaaradda Arrimaha dibadda ay ku fasaxday Markab waday dhuxul sharci daro ah oo ku xernaa xeebaha dalla Cumaan.
Sidoo kale Ra’iisal wasaaraha dalka ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha debadda Cabdisaciid Muuse Cali .
Waxaa uu amray in Hay,addaha dowladda ay ku sameeyaan baaritaano sababta keentay in uu falkaan dhaco.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Hantidhowraha qaranka iyo Hey’adaha amniga wuxuu faray inay baaritaan ku sameeyaan falkaan sidii uu u dhacay, kadibna ay u gudbiyaan hey’adaha garsoorka dalka.
Wararka4 hours ago
Wararka1 day ago
Diiwaangelinta musharrixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta bilaabaneysa
Guddoomiye Aadan Madoobe Iyo James Swan Oo Ka Shiray Dhameystirka Doorashada.
Golaha Ammaanka ee QM oo si adag uga hadlay weerarkii Ceelbaraf.
Barnaamijyada1 year ago